Isgaadhsiinta – Windows – Vessoft
Khadka – aalad isgaarsiinta ka dhexeysa isticmaaleyaasha adduunka oo dhan. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso wicitaano cod ah, wicitaano fiidyow, iyo inaad isdhaafsato fariimaha qoraalka ah.
Software si ay u qabtaan isgaarsiinta codka tayada codka sare ee dib u dhac ugu yar. Software waxaa si weyn u isticmaala ciyaartoyda iyo taageertaa abuurista kooxaha mowduuc kulamada kala duwan ee computer.
Khilaafaad – barnaamij kombiyuutar ayaa loogu talagalay isgaadhsiinta codka iyo qoraalka oo leh astaamo gaar ah oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo xidhiidhka inta lagu gudo jiro ciyaarta.
qalab The haboon inay isgaadhsiin la yeeshaan dadka adduunka oo dhan. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isgaadhsiin la isticmaalayo wicitaanada codka iyo video ama fariimaha qoraalka ah.
Camfrog – waa barnaamij loogu tala galay qoraalka iyo fiidiyowga xiriirka lala yeesho isticmaaleyaasha kale ee adduunka. Sidoo kale, waxaa suurogal ah in la abaabulo qolal gaar ah oo leh mowduucyo kala geddisan oo looga doodi karo.
Software ee isgaarsiinta codka saaxiibada iyo dadka kale ee ku meel fog wax. Sidoo kale software awood u tahay in la abuuro channels codka adiga kuu gaar ah.
Warqadani waxay taageertaa sifooyinka gaarka ah ee loogu talagalay in lagu wanaajiyo iskaashiga wadajirka ah ee u dhaxeeya xubnaha kooxda
Tani waa wargeeye shirkad leh joornaalada asaasiga ah, raadinta horumarka fariimaha ama faylasha iyo isdhexgalka adeegyada dibadda.
Software ayaa awood badan ku hadalka codka ee shabakadda. Software waxay bixisaa ah gudbinta codka tayo sare leh oo waxaa inta badan ka mid ah ayaa isagana ka xirfad loo isticmaalo.
Agabka in la sameeyo cod iyo video ku baaqay in adduunka oo dhan. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u sameeyaan wicitaanada u diro telefoonnada gacanta iyo taleefannada guryaha.
Tani waa farriin caan ah oo loogu talagalay fariimaha deg dega ah, wareejinta faylka, isgaarsiinta codka iyo fiidiyowga.
KakaoTalk – barnaamij softiweer ah oo ku hadla codka iyo qoraalka isgaarsiinta isticmaaleyaasha kale. Softiweerka wuxuu awood u siinayaa inuu dejiyo furaha sirta ah ee loo adeegsado wada hadalka isla markaana loo habeeyo sanduuqa wadahadalka baahiyaha isticmaalaha.
Mobil – aalad shaqeysa oo loogu talagalay isgaarsiinta codka. Softiweerku wuxuu si otomaatig ah u kordhiyaa cadeynta dhawaaqa wuxuuna meesha ka saaraa sawaxanka isagoo siinaya xiriir tayo sare leh oo wada xiriirka.
AIM – aalad loogu talagalay qoraalka, codka iyo farriimaha fiidiyaha. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la wadaagto feylasha oo aad ku darto isticmaaleyaasha xiriiradaada barnaamijyada kale.
chat The habboon iyo MFT inay la xiriiraan on network degaanka ama internet-ka. software wuxuu bixiyaa heer sare ah ilaalinta si looga hortago baxsiga xogta.